Oovimba be-S & P 500 - Iphepha le-2 le-13
Isalathiso se-S&P 500 asikwazi ukuZinzisa ukukhwela, ukurhoxa ukusuka kwiMbali ePhakamileyo
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Okthobha 27
I-index ye-S & P 500 ayiphumelelanga ukugcina i-upside run, iwa ukusuka kwixesha eliphakamileyo le-4,599 ukuya kwi-4,557 ekuqaleni kwezorhwebo ngoLwesithathu. Ngaphandle kwe Ukunciphisa i-Fed Ukukhathazeka, kukho isimo sengqondo esilumkileyo phambi koqikelelo olubalulekileyo lwangaphambili lwe-US Q3 GDP.
Amanqanaba okumelana: 4700, 4650, 4600
Amanqanaba enkxaso: 4551, 4500, 4465
I-S & P 500 ihlangabezane nokuchasana kwi-4585, kunye neveki elandelayo ephezulu yokuthintela i-upside kufuphi ne-4600. Endleleni ekhuphukayo, iinkunzi zenkomo zinokuthi zijongane neendlela ezincinci zendlela. Kumanqanaba e-4551, inkxaso eyomeleleyo inokubeka emngciphekweni ukubandakanyeka kweebhere.
Iqela lenkxaso, kwelinye icala, libekwe malunga namanqanaba angama-4500, aphezulu kunokudibana kwenyanga edlulileyo. Ukuba oku kokugqibela kuphulwa, inkxaso kwinqanaba le-4465, elidibanisa umyinge ohambahambayo we-5 kunye ne-13, elandelwa yinkxaso yokunyuka kwe-trendline, inokuzanywa.
I-S & P 500 yexesha elifutshane: Ukuhlela
Kwixesha leeyure ze-4, umxholo wohlalutyo lobugcisa we-S&P 500 index okwangoku ukwindawo enomdla kakhulu. Ikhefu ngaphezu kwamanqanaba e-4600 iya kuba yi-bullish, kodwa ikhefu elingaphantsi kwamanqanaba e-4551 kumgca wokuxhasa othe tye kuya kugcina i-uptrend ingazinzile.
Ukuphonononga iimpawu zeseshoni yangaphambili, babonise ukutyhala phambili. Nangona ihla, amandla ahambelanayo ahlala ngaphezulu kwe-50 midlines. Zombini i-5 kunye ne-13 i-avareji ezihambayo ziye zathambeka ezantsi kwaye zinokusondela kwi-crossover edlulileyo kwinqanaba le-4551.
Inkcazo ye-S & P 500 i-Rally-Day Rally, i-Edges kwi-All-Time Highs
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Okthobha 20
NgoLwesithathu, isalathiso se-S & P 500 savulwa luhlaza kusuku lwesithandathu ngokulandelelana. Isalathiso, esabetha lonke ixesha eliphakamileyo nge-4,551 ngoSeptemba 3, sasinyuke nge-0.25 yepesenti ngosuku nge-4,542 ngexesha lokubhalwa. Umngcipheko wokutya inyukile ngenxa yemivuzo yekota encomekayo.
Amanqanaba okumelana: 4650, 4600, 4551
Amanqanaba enkxaso: 4500, 4465, 4400
Kwiitshathi zemihla ngemihla, iinkunzi zeenkomo zenze intshukumo elungileyo kude kurhwebo olusecaleni, kwaye isalathiso sinokuzama ukugcina ukophula inqanaba lokumelana ne-4500. Okwangoku, ukuba iinkunzi zeenkomo azikwazi ukubuyisa ulawulo ngeli xesha, ukubuyela kwinkxaso elandelayo kumanqanaba angama-4465 kunokwenzeka.
Utyekelo lwexesha elide luhlala luphezulu ngononophelo, ngokuchasana okubonakalayo ngaphaya kwelona xesha liphezulu le-4,551 ekuqaleni, ekufuneka yoyisiwe ukuvula indlela yokuhambela kumanqanaba angama-5,000. Nangona kunjalo, sinokubona kuvavanyo olungqongqo lweqela lamanqanaba okuqikelela kwinqanaba lama-4551/4600 nangaphaya kwixesha elizayo.
Ngexesha leseshoni yokuqala yaseMelika yokuthengisa, i-S & P 500 yenyuka kakhulu. Kumanqanaba angama-4536, isalathiso siyarhweba ngaphezulu komndilili ohamba-hambayo we-5 kwipatheni yendlela ejikelezayo. Isalathiso kulindeleke ukuba sinyuke ngexesha leseshoni elandelayo yorhwebo, ngokwemiqondiso yezobuchwephesha. Amanqanaba angama-4551 anokuba yinjongo enokuba iinkunzi ziphume.
Inkxaso ethe tyaba kwi-4500, kwelinye icala, inokusebenza njengenkxaso yesalathiso sexesha elizayo kule seshoni nakwelandelayo. Ukuba isalathiso siyenyuka, siyakuxhaswa kwikhefu ngeyure ezi-4 ezihamba phakathi kwe-5 kufutshane namanqanaba angama-4530, apho abathengi banokuphinda bavele kolu hlengahlengiso.
I-S & P 500 Index Slips zeXesha leshumi elinanye kulwandiso lwemida yamatyala e-US
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Okthobha 6
I-S & P 500 iyatshintsha ijikeleze i-intraday yayo esezantsi, yehle nge-1.25 yeepesenti ngosuku phantsi kwenqanaba le-4,300 kwiyure zokuqala zangoLwesithathu. Ukulandela ilahleko enkulu ekuqaleni kweveki, ii-indexes ezinkulu kwi- eunited States Qhubeka uphantsi, ngenxa yemvakalelo yentengiso. Ngokubhalwa, i-S & P 500 Index ithengisa ngezantsi kwi-4295.
Amanqanaba okumelana: 4451, 4400, 4350
Amanqanaba enkxaso: 4250, 4,150, 4000
Njengabathengisi ekugqibeleni bajonge ukuthatha ithuba lokulungiswa kwexesha eliphakathi, isalathiso silwela ukugcina ukunyuka kwawo ngaphezulu kwengingqi yenkxaso ye-4300. Okwangoku, uxinzelelo lwe-bearish luqikelelwa ukuba lube buthathaka kwaye luhlale lujikeleze amanqanaba aphakathi kwama-4200, njengoko intengiso ithengisa ngaphezulu kwenqanaba lenkxaso le-4250, idibanisa ngakumbi kwiseshoni elandelayo.
I-RSI okwangoku ibhekise kwimigca yayo esezantsi, ngelixa ixabiso liye lehla emva kokutsala amanqaku ukusuka kuma-4551 amanqaku ngoSeptemba phezulu, eqinisekisa umbono wembonakalo. Kwixesha eliphakathi, umndilili ohambayo ohamba kwindawo yawo kwaye unokuhamba ngokuthe tye.
I-S & P 500 yeXesha elifutshane elihamba:
Isalathiso se-S & P 500 siye sokwehla kwikota ekufutshane emva kokudityaniswa kwamanqanaba okudityaniswa kwamanqanaba ama-4350 kwangoko kule veki. Njengoko ixabiso lehle ngezantsi kwe-4 yeyure ye-MA 5 kunye ne-13, ukubuyela kwakhona kwenkxaso ekufutshane yajika ukumelana namanqanaba angama-4300 kulindeleke ngaphambi kokuba amaxabiso abuyele phambili.
Indawo yokuxhasa i-ndex ejikeleze i-4250 kufuneka ibambe ukugcina umngcipheko okhawulezileyo uncitshisiwe ukubuyela kwi-4350, ngaphezulu apho sifumana ukuxhathisa ngaphezulu kwe-avareji ehambayo e-4400, ekufuneka ikhuphe inzuzo ekuqaleni.
I-S & P 500 Ebuyayo kwi-2-Day Plunge Around 4350 Level
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Septemba 29
Kumsebenzi ophakamileyo, i-S & P 500 Index icinezele ezantsi kusuku olungaphambi kolwezantsi lwama-4347. Kususela oko yabuyela umva iseshoni yangoku ukubetha nge-intraday ephezulu ye-4391 ngexesha lokubhalwa. Ukusukela oko kwaqala iveki, isalathiso se-S & P 500 sawa kwaye ngoku sibuyisela uninzi lweenzuzo zalo zamva nje. Kuze ngenxa yokuqiniswa kwemali yase-US kunye nokunyuka isivuno sebhondi.
Amanqanaba okumelana: 4600, 4500, 4400
Amanqanaba enkxaso: 4350, 4300, 4250
Kwitshathi yemihla ngemihla, ixabiso lenyuka ngokuzinzileyo emva kokuphinda ubambeke phantsi komndilili wokuhamba we-5 kunye nokutsiba umgca othe tyaba kumanqanaba angama-3350. Ukuxhamla kwinkxaso ethe tyaba eqhagamshela ukusuka nge-19 ka-Agasti iphantsi, kunye nekhandlela elikhuthazayo lemihla ngemihla, liyanceda kule nkqubela phambili ukusuka kumanqanaba angama-3350.
Umgca wokuxhathisa ngokuthe tyaba kumanqanaba angama-4400 uthintela ukunyuka okuthe ngcembe ukuya phezulu kuSeptemba kumanqanaba angama-4551. Ukuba ukuthenga inzala kuyaphumelela ekophulweni ukuya kwimbali ephezulu, ukuxhathisa kwinqanaba le-4400 kunokunyuka. Ingeniso engaphezulu inokuba ngumceli mngeni ngokuxhathisa kwi-4465 nakwi-4551 handles.
Ngexesha leseshoni yokuqala yangoLwesibini yorhwebo, i-S & P 500 yafumana iipips ezingama-40 okanye iipesenti ezingama-0.50. Ngaphandle kwamanqanaba enkxaso ye-4350 yexesha elikufutshane, isalathiso siyarhweba ngokujikeleza i-avareji yokuhamba kwe-5 kwipateni yomjelo ophakathi. Isalathiso kulindeleke ukuba sihle kwiseshoni elandelayo, ngokwemiqondiso yezobuchwephesha.
Inqanaba lama-4430 linokuba yinjongo yeenkunzi zeenkomo. Nangona kunjalo, isalathiso sinokujongana nenkcaso ukusuka kuxhathiso olungagungqiyo kwi-4400 kule seshoni nakwelandelayo. Ukuba i-S & P 500 iyawa, iyakuxhaswa kwiidiphu ngenkxaso ethe tyaba kumanqanaba angama-4300, apho abathengi banokuphinda bavele khona.
I-S & P 500 ngoMeyi inamava oLungiso olungaphezulu lwePullback esezantsi
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Septemba 22
I-S & P 500 iqikelelwa ukuba ibe nobuthathaka obugqithisileyo njengoko isondela kwiqela lezithintelo phantsi kwe-4330/4300. Isalathiso sithatha iibhidi, sithatha ukwehla kweentsuku ezine ukusuka kwi-4348 ukuya kwi-0.77 yepesenti yangaphakathi ngolwesiThathu, inyathelo lokuqala lokuya phezulu kwiintsuku ezi-5 ezidlulileyo.
Amanqanaba enkxaso: 4300, 4200, 4100
Kwiitshathi zemihla ngemihla, iinkunzi zeenkomo zenze intshukumo elungileyo kude nomkhwa wokuwa, kwaye isalathiso sinokuzama ukugqobhoza kwinqanaba lokumelana ne-4400. Okwangoku, ukuba iinkunzi zeenkomo azikwazi ukuphinda zilawule ulawulo okwangoku, ukubuyela umva kwinkxaso elandelayo ejikeleze amanqanaba angama-4266 kunokwenzeka.
Ukukhetha ixesha elide kuhlala kuphakamile ngononophelo, ngokuchasana okokuqala ngama-4400, ekufuneka koyiswe ukucacisa indlela yokuhamba kumanqanaba angama-4500. Nangona kunjalo, sinokubona kuvavanyo olungqongqo lweqela lamanqanaba okuqikelela kwi-4431/4465 yengingqi kwixesha elizayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso se-S & P 500 siwele ngaphantsi kwexesha lonke eliphakamileyo le-4551 kwaye satyibilika singaphantsi komndilili wexesha elifutshane lokuhamba phakathi kwe-5 kunye ne-13. midpoint yayo. Ukuba iibhere zifumana ulawulo, inkxaso ethe tyaba kumanqanaba angama-4300 inokubonelela ngenkxaso kwangoko.
Kwelinye icala, ulwandiso olusecaleni lunokutyhala isalathiso kumaxesha aso onke angama-4551 kwaye kwinqanaba lokumelana nama-4600. Ngaphandle kokutsala okuqhubekayo, isalathiso se-S & P 500 kulindeleke ukuba siqhubeke sikhula kungekudala.
tags I-S & P 500
I-SP500 ivavanya kwakhona inqanaba eliphambili elingaphambili
Inkxaso ephambili: 4440
Inkcaso ephambili: 4490
I-SP500 ibirhweba ngokutsalwa okucwangciswe kakuhle kuba iprinte iindawo eziphakamileyo ezijikeleze i-4550 kwangoko kule nyanga. Oku kutsalwa kubanjiswe kwicala eliphantsi kwinqanaba le-4440 ngelixesha lokuzama kwakhona ukwakheka kwaphakathi kwexesha.
Uluvo lwam apha kukuthenga kwikhefu lobume be-bearish kwangoko (iintsuku ezi-5 zilandelelana eziphantsi zemihla ngemihla) ukuphinda kubeke phezulu kwezolo / ipivot yeveki.
Umzuzu kufanele ukuba wome kwi-ADR ephezulu ejikeleze inqanaba lama-4500 ukuba le meko iyadlala.
I-S & P 500 yoLondolozo olungaphaya kwama-4,500 XNUMX ngaphandle koVavanyo oluButhathaka lwaseMelika
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Septemba 8
Ku-4,516, i-S & P 500 Index yehle nge-0.05 yeepesenti ngosuku. Emva kokusebenza okuthembekileyo kwintengiso yesitokhwe sehlabathi kwiintsuku zamva nje, ezandiswe e-China kodwa hayi eJapan, inkxalabo malunga nokudodobala kwezoqoqosho ngenxa Ukwahluka kweDelta inyuke emva kwengxelo yemirholo engeyiyo eyemveliso ifike kulindelo.
Amanqanaba enkxaso: 4450, 4400, 4350
I-S & P 500 iyancipha ukusuka kwinqanaba lokumelana ne-4551, engummandla othe tyaba odibanisa iincopho zika-Agasti 2021. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba isalathiso samandla esimalunga nemihla ngemihla sithengisa ngaphantsi kwendawo ethengiweyo ukusukela ngoJulayi, ebonisa ukuba umfutho wokunyuka uyaphela.
Ukubuyela umva kunokwenzeka ukuba le ndawo ichazwe ngentla kunye nenqanaba lokumelana ne-4551 kuvavanywa kwaye kuyaliwa kwakhona. Nangona esi ayisosilumkiso sokubuyela umva, ukudinwa okwexeshana akunakukhutshwa. Ukuxhaswa kwexesha eliphakathi kuya kuba yi-4431 kunye nenani elijikelezayo le-4400.
Kwisakhelo seyure ezi-4, isalathiso se-S & P 500 sikwindlela enyukayo, ebonisa ukuba intengiselwano yangaphakathi nosuku inokufumaneka ngokusekwe kwinqanaba elikhulu lesakhelo. Ixabiso liseke iphethini yokuqhubekeka inyuka kwisakhelo seyure ezi-4, kwaye zihlala zisophula kwicala langoku.
I-RSI ngoku ithengisela kwiindawo zayo eziphakathi; kodwa, ukuba ibuyela ngezantsi, inokubonisa ukuba iibhere sele zizakuqala iqela labo, oko kuthetha ukuba buthathaka ngakumbi ngaphambili. Izikhundla ezimfutshane phantsi kwamanqanaba angama-4500 zikhethwa, kujoliswe kuzo kwi-4431 kunye ne-4400 eyandisiweyo. Ngenye indlela, sinokujonga ezinye izibonelelo, ngeenjongo ezingama-4551 kunye nama-4600.
I-S & P 500 ibambe izinzile ngaphandle kokuchasana kweempawu
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Septemba 1
I-S & P 500 ifikelele kwi-4545 ephezulu ukusukela ekuqaleni konyaka. Nge-Agasti, i-PMI yezeMveliso e-United States nase-United Kingdom yaphuculwa yamanqaku ayi-60.3. Ngemisebenzi engama-374K elahlekileyo ngo-Agasti, i Idatha yemisebenzi ye-US ADP yawa kancinci. Icandelo lengqesho le-PMM yokuThengisa i-PMI yawa.
Amanqanaba okumelana: 4650, 4600, 4550
Amanqanaba enkxaso: 4500, 4400, 4360
Yonke imihla, i-rally yesalathiso ekugqibeleni igqithile kwimimandla engama-4500, ngamanqanaba ongezelelweyo okuchasa ukuya kuthi ga kwi-4600 ephezulu. I-S & P 500 inyuke nge-0.09 yeepesenti ngosuku nge-4,542 njengalo mbhalo. Eyona meko inokwenzeka yeyokuba ikepusi kuluhlu lwe-4500-4600, ilandelwe lixesha elinokubakho lokulungisa.
I-MA 5 ibonakala ngathi ihambisa ixabiso ukusuka kwi-4500s ukuya kwi-4600s. Kwicala elisezantsi, i-4400 (inqanaba lengqondo) lelona nqanaba lenkxaso lihambelana ne-MA 200. Ukuba isalathiso sivala ngaphantsi kwelo nqanaba mihla le, kunokunyanzelwa ukuba uzame ukwehla ukuya kumanqanaba e-4000 kwiiseshoni ezizayo.
Kwisakhelo seyure ezi-4, isalathiso se-S & P 500 sikwimeko elungileyo, oko kuthetha ukuba ukuthengiswa kwentsuku zangaphakathi kunokufumaneka ngokusekwe kwinqanaba elikhulu lesakhelo. Ixabiso liseke ipateni ekwi-bullish kwisakhelo seyure ezi-4, esihlala siphuka kwicala langoku.
I-RSI ngoku igqithisile, kodwa ukuba yaphuka ngaphantsi kwelo nqanaba, inokuba luphawu lokuqala lokuba iibhere zimiselwe ukuqala iqela labo, okuthetha ukuba buthathaka ngakumbi ngaphambili. Izikhundla ezimfutshane ezingaphantsi kwamanqanaba angama-4500 zikhethwa, kujoliswe kuzo kwi-4465 kunye ne-4400 ukongezwa. Ngenye indlela, sibona i-4550 kunye ne-4600 njengeenjongo zokuqhubeka nokuzuza.
I-S & P 500 i-Retreats ngaphantsi kwe-All-Time Highs emva kokuQala kweVeki
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Agasti 25
Emva kokurekhoda ixesha elipheleleyo le-4496, ambalwa amanqaku aneentloni zemiqobo engama-4,500 500 ekuqaleni kweveki. I-S & P XNUMX iyakhukhumala ngoLwesithathu, ngaphandle kokuthumela iingeniso ngexesha leseshoni yangaphambili. Isalathiso ithengisa nge-4484, yehle nge-0.04% ngosuku ngeli xesha lesithuba.
Amanqanaba okumelana: 4700, 4600, 4500
Amanqanaba enkxaso: 4475, 4400, 4350
Ngosuku oludlulileyo, i-S & P 500 inyukele phezulu ukuya kufikelela kumazinga aphezulu angama-4496, abatyali-mali benethemba lokubuya kwempembelelo enkulu eyaphula imiqobo ephezulu engama-4500 emva koko baphinde bafumana irekhodi elitsha. Kwiseshoni yanamhlanje, nangona kunjalo, ukunyuka kwesalathiso kunyuka kumanqanaba aphezulu angama-4491.
Ukujonga ukusebenza kwesalathiso kwezi ntsuku zine zidlulileyo, ukubuyela umva emadolweni kufanele kulindelwe, kodwa idiphu ziya kujongwa njengezilungisayo, kwaye ujonge amandla okubuyela hayi kumanqanaba aphezulu angama-4500 kuphela nangaphaya, ngexesha elifanelekileyo. Umndilili wokuhamba we-5 kunye ne-13 uhlala ungaphantsi njengenkxaso yexesha eliphakathi.
Kwisakhelo seyure ezi-4, ukuxhathisa kubonwa ngeenxa zonke ngezolo eliphakamileyo malunga namanqanaba angama-4496, kulandele amanqanaba aphezulu angama-4500. Injongo elandelayo inokuba ngamanqanaba aphezulu angama-4600, kwaye ukuba yaphuliwe, ukuxhathisa kunokubakho kungqonge imiqobo engama-4700.
Inkxaso yaqala yachongwa nge-4475, emva koko ngo-4431, ngesiphelo esisezantsi kwesitishi ngoku esibambe amanqanaba angama-4400 ukugcina ingozi ekhawulezileyo iphezulu. Ikhefu linokubangela ukwehla okunzulu ukuya kumanqanaba angama-4350, kodwa abathengi abatsha banokubakho ngaphambili kwezi zinto ziphantsi zichaziweyo.
Phawula: I-Learn2.trade ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali.
Isalathiso se-S & P 500 sihlala sinoxinzelelo phakathi kweDatha yase-US yangoku
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Agasti 18
Ngaphandle kwelahleko yosuku lwangaphambili i-S & P 500 ibuya ngaphambi kwe-4400, ifikelela kuma-4453 aphezulu ngexesha leseshoni yaseYurophu ngelixa kubhalwa, isalathiso senyuka nge-0.06% ngosuku. Yokuthengisa NgoJulayi kwehle iipesenti ezi-1.1 ngenyanga ukuya kwi- $ 617.7 yezigidigidi, ngokwamanani akhutshwe liBalo loBalo lase-US kwangoko kusuku olungaphambili.
Amanqanaba okumelana: 4600, 4550, 4500
Amanqanaba enkxaso: 4400, 4360, 4300
Kwitshathi yemihla ngemihla, isalathiso sikhokele phambili kwenkxaso ethe tyaba kwi-4400. Logama abathengi begcina ulawulo, ukutyhala okungapheliyo kwinqanaba le-4400 kubonakala kungenakuthinteleka. I-S & P 500 inokufikelela kumaxabiso aphakathi ukuya kwixesha elide kumanqanaba angama-4500 ukuba le ndawo ikhankanywe apha ngasentla yaphulwe ngokuphindaphindiweyo.
Inkxaso, kwelinye icala, ibonakala kufutshane namanqanaba e-4431 kunye ne-4400 kwiseshoni yangoku. Ukulandela ukunyuka kokuqala, ukubuyela kwindawo ephezulu ngaphambili kufutshane ne-4478 okanye ngaphezulu kumanqanaba angama-4482 kunokulindelwa. Ngenxa yoko, ukungena okude okunokwenzeka kukulinda ukubuyela umva kwindawo yenkxaso kufutshane namanqanaba angama-4400.
Kwixesha leeyure ezi-4, ukwaphulwa kwamanqanaba angama-4431 kuyabonakala, kubonisa ukubaluleka kweli nqanaba, elixhaswa ngakumbi yinto yokuba umndilili ohambahambayo unokuzama kamva ukuwela umgca wenkxaso ethe tyaba, eqinisekisa ukubuyela umva kunye bounce yayo elandelayo.
Ngokobuchwephesha, eli nqanaba lahlula ukwehla kwirali. Ngenxa yoko, abathengisi abaninzi bayakuphepha ukuthenga iiasethi xa kuthengiswa ngezantsi kwenqanaba 4431, njengokuhamba ngaphezulu kwelo nqanaba kudala umqondiso wokuthenga. Ngokubanzi, kwixesha elifutshane, i-S & P 500 iyaqhubeka nokudibanisa kwaye ihlale ibhidi kwisitishi esiphakamileyo.
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 13 abaDala izithuba →